We Fight We Win. -- " More than Media ": Burma's Broken Education System Under President Thein Sein's Education Reform
Burma's Broken Education System Under President Thein Sein's Education Reform
ဘတ်ငွေ ၂.၅၇ ထွီလီယံ သုံးစွဲမည့် ထိုင်း နိုင်ငံ ၂၀၁၅ Budget မှာ ပညာရေးအတွက် ဘတ်ငွေ ၅၀၂. ၂၅ ဘီလီယံသုံးစွဲဖို့ ရှိတယ်။ ဒါဟာ ၂၀၁၅ Budget ရဲ့ ၁၉.၅ % သုံးစွဲသွားမှာဖြစ်သလို၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ထက် ၄% တိုး သုံးစွဲသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။
ထိုင်းစစ်တပ် က တော့ ၁၉၃.၅၀ ဘီလီယံ သာ သုံးစွဲသွားမှာဖြစ်တယ်။
ထိုင်း နိုင်ငံ ဟာ အနာဂတ် လူသားအရင်းအမြစ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေး မှာ ပညာရေး အတွက် ဘယ်လောက် ၇င်းနှီးမြုပ်နှံ လုပ်ဆောင်နေသလဲဆိုတာပါ.
Thai passed B2.57-trillion budget bill. The Education Ministry was allocated the biggest budget of 502.25 billion baht,a4% increase from last year's budget and 19.5% of the total budget allocations. Defence spending, which typically increases in Thailand afteracoup, grew 5.3% from last year's allocation to 193.50 billion baht.